Miresaka Momba Ny Tetikasany “Ny Làlan’ny Andevo” i Paul Théa, Gineana Mpanatontosa Sarimihetsika · Global Voices teny Malagasy
Miresaka Momba Ny Tetikasany “Ny Làlan'ny Andevo” i Paul Théa, Gineana Mpanatontosa Sarimihetsika
Voadika ny 02 Aogositra 2017 11:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Ελληνικά, Español, Français
Paul Théa ao anatin'ireo trano fitenenany, nahazoana alàlana taminy.
Paul Théa, nirotsaka hatry ny ela tamin'ny famerenana indray ireo horohoro tao amin'ny Camp Boiro any Ginea, tamin'ny alalan'ny famokarana lahatsary nampandraisany anjara ireo niharam-boina na ny fianakavian'izy ireo, dia nanomboka tetikasa mba hampahafantarana ny “Làlan'ny andevo”, ny fanangonam-bokatra nataon'izy ireo tany amin'ny faritra amorontsirak'i Ginea hatrany amin'ny toeram-piantsonan'izy ireo farany, any Amerika avaratra.
Mpanatontosa fandaharana, mpanentana amin'ny onjam-peo sy fahitalavitra i Paul Théa, manampahaizana manokana amin'ny fifandraisana. Nianatra ny Fitantanana ara-toekarena sy sosialy tao amin'ny anjerimanontolon'i Montpelllier, ny Fitantanana ampiasàna Solosaina tao amin'ny Ivon-toerna Fampiroboroboana ny Ara-Barotra (IPC) any Toulouse ary ny Onjam-peo/Fahitalavitra tany Etazonia izy. Tao anatin'ireo sarimihetsika notontosainy, niresaka an-tsitrapo momba ny fanomezam-boninahitra ny ekipa mpilalao baolina kitra Hafia77, ohatra, sy ireo fanadihadiana maro, ka anisan'izany ny an-dRtoa Diallo Tello, vadin'ny sekretera mpanatanteraky ny Firaisambe Afrikana, izay maty noho ny hanohanana sy ny hetaheta tao amin'ilay Camp Boiro mahonena. Nanoratra ihany koa izy lahatsoratra maromaro momba ny fanatanjantena, ny kolontsaina sy ny politika, izay, tiany tsipihina, fa tsy lohahevitra ankafiziny manokana. Hita ao amin'ny kaonty YouTube-ny koa ireo zavatra novokariny.
Mialoha ny niaingany avy any Konakry ho any Karolina Atsimo, nanaiky hamaly fanontaniana vitsivitsy napetraky ny Global Voices momba ny tetikasany izy: “ny Làlan'ny andevo”, izay afaka jerena ato ny fiantombohany, miaraka amin’ny Tantaran'ny Seranantsambon'ny Andevo any Dominya, miresaka ny fahatongavan'ireo voanjo voalohany mpanjanaka, ny fiangonana ary ny toeram-piaingan'ireo andevo.
Global Voices: Vao haingana, hita ho tena navitrika ianao tamin'ireo fanehoankevitrao tao amin'ny Facebook momba ny fakàna indray ny trano tranainy iray. Inona izy io?
Paul Théa: Trano lehibe tamin'ny fanjanahantany mitondra ny anaran'i PZ (Patterson /Zochonis) izy io, ny anaran'ny orinasa izay nanorina azy. Miorina ao Dominya, ao amin'ny prefektoran'i Boffa, akaikin'ny seranantsambon'ny mpivarotra andevo sy ny birao eoropeana, mba ilazana aminareo fa endrika iray matanjaka ho an'ny tetikasanay ny hanao azy io ho tranombakoka ho an'ny làlan'ny andevo. Nolavina ny fangatahako voalohany, 20 taona mahery lasa izay, ary efa tamin'ny fanandramana fahatelo aho vao nahazo ny fankatoavan'ny Ministeran'ny Fizahantany. Tonga ny fotoana, satria efa tena simba ilay trano lehibe, ary manararaotra izao fotoana izao aho hisaorana ireo tsara sitrapo izay nanampy tamin'ny fahazoana ilay toerana.
GV: Resaho aminay ny momba io tetikasa io : “Ny Làlan'ireo andevo”
P. T. Raha ny marina dia misy làlana maromaro, miasa momba io resaka io izahay amin'izao fotoana izao, na izany aza afaka tanisaiko aminareo ny làlan'i Timbo, ny renivohitr'i Fouta teokratika hatrany Farinya any amin'ny Nyara Belli (any amin’-dry zareo Lightburn), hatrany Fortin de Boké ka hatrany amin'ny amin'ny seranantsambon'ny andevo sns. Misy ny seranantsambon'i Dubréka sy ny seranantsambon'i Benty any Forécariah, miandry ny sarintanin'ireo làlana aho vao afaka manome fanazavana misimisy.
GV: Any Ginea, ianao ve no voalohany miresaka io tantara fahiny mandratra io? inona ny maha-samihafa ny tetikasanao sy ireo hetsika hafa?
Tsia, tsy izany mihitsy, misy hetsika hafa maromaro mba hanazavana misimisy kokoa io tantara fahiny mandratra io. Ohatra, nisy seminera iraisam-pirenena momba ny “fombandrazana tononina am-bava sy ny varotra andevo“, natao tany Konakry tamin'ny martsa 1997, na ihany koa ny fivorian'ireo manampahaizana manokana amin'ny “Tahiry Eoropeana momba ny varotra andevo”, izay natao tany Copenhague tamin'ny volana Febroary ny taona nanaraka an'io. Naelin'ny UNESCO ny tatitra. Fa kosa, raha ny fahafantarako, izahay no voalohany nanolotra tranombakoka momba ny fanandevozana tany Ginea sady manampy ny fampidirana ao ny tantaran'ireo andevo naondrana tany Karolina Atsimo, ohatra. Izay atolotray dia hanana tombony amin'ny fampisehoana amin'ireo mpitsidika, tsy ny toerana ihany, fany rakitsary tahirin-kevitra ihany koa. Izany no antony anaovako fanadihadiana momba io resaka any Ginea io amin'izao fotoana izao, ary rehefa avy eo aho tsy maintsy handeha any Karolina Atsimo mba hihaona amin'ny vondrom-piarahamonina Gullah / Greechee, ireo taranaky ny andevo tonga manokana avy any amin'ny morontsiraka Andrefan'i Afrika, Angola ary Madagasikara.
GV: Azonao resahina aminay ve ny momba ilay fanadihadiana izay omaninao amin'izao fotoana izao momba io resaka io? Ahoana no nahatongavan'ilay hevitra tao aminao, ahoana no ataonao?
PT: Nampianatra ireo mpitarika mpizahatany voalohany aho tany Ginea, tamin'ny volana may sy jona 2017, ary ho fampiharana teny an-kianja, nandeha tany amin'ny seranantsambon'ny andevo any Dubréka izahay, avy eo tany Dominya. Ny fijoroana vavolombelon'ireo mponina momba ny fandefasana andevo tao amin'ny seranantsambon'i Dominiya any Karolina Atsimo no niteraka ilay ainga. Ny aterineto sy olona vitsivitsy niresaka no nampahafantatra ahy ny halehiben'ny varotra telozoro tao Rio Pongo, mialoha lavitra ny Goree any Senegaly. Tao anatin'ireo andevo fotsy hoditra niorina tao amin'io faritra io, nisy Amerikana toa an'i Louis Lightburn, vadin'i Nyara Belli, mpivarotra andevo, nalaza tamin'izany fotoana izany, avy aminà fianakaviana lehibe tao an-toerana izay nanana tanimbary maromaro tany Karolina Atsimo; tena tian'ny mpamboly vary ny andevo tamin'izany. Namatsy andevo ny fianakaviany i Lightburn. Mbola tany Rio Pongo ihany, nisy andevo nanafaka ny tenany sy nanorina tanàna. Sarotra ny ho tara amin'ny resaka toy izany ho anà mpanatontosa fandaharana!
GV: Inona ilay firenena Gullah Geechee noresahinao tao amin'ny pejy Facebook nao?
PT: Araka ny nolazaiko toe aloha, ireo andevo naondrana tany Karolina Atsimo ary niorim-ponenana nanamorona ny morontsiraka Andrefana dia avy amin'ny foko samy hafa; niteraka fomba fiteny iray izy ireo (kreola) mba hifankahazoana ary nitazona ireo kolontsaina afrikana izay arovan'izy ireo fatratra, eny hatramin'izao. Ny Gullah dia fiovàn'ny Gola, foko any Sierra Léone sy Geechee, fiovàn'ny Kissy, foko hafa any Sierra sy Ginea. Ambaran'izy ireo ny Firenena Gullah Geechee ary manana vehivavy mpitarika izay mitety an'izao tontolo izao ho fampahafantarana ny kolontsain'izy ireo, ny fomba fiteny izay mihavery ary ho fiarovana ny zon'izy ireo satria very koa ny tanin'ny razamben'izy ireo.
GV:Miara-miasa amin'izy samy izy sy aminareo ve ny andrim-panjakana amerikana?
PT: Vao avy namarana ny fanoratana tetikasa izay halefanay any amin'ny andrim-panjakana samy hafa, ary na amin'ireo tranombakoka ho an'ny andevo aza, izahay ho anà fiarahamiasa na famatsiana ara-bola.
GV: Amin'izay indrindra, azo anontaniana ve hoe ahoana ny nataonao ho an'ny famatsiambola hatramin'izao?
PT: Hatramin'izao aloha, avy aty am-paosiko ny rehetra, ary satria aho tsy mpanankarena, dia miantso izay tsara sitrapo rehetra mba fara-faharatsiny hamatsy ilay fanadihadidana. Mazava ho azy, amin'ny famaranana ilay rakitsary dia mazava hoazy fa hotononina ao anatin'ireo mpamatsy ny anaran'ireo mpanohana ; asa izay mila fotoana sy vola izany, fa satria ho zava-dehibe ho an'ny taranaka ho avy izany, dia vonona ny tenako.
GV: Ny UNESCO, ireo governemanta voakasik'izany ve mahatakatra ny halehiben'ny fikarohanao? Miara-miasa amin'ireo andry samihafa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izay efa miasa ihany koa amin'io sehatra izay ikatrohanao io ve ianao?
PT: Ny Ministeran'ny Fizahantany dia mahatsapa tsara ny lanjan'ny làlan'ny andevo ho toy ny vokatra ara-pizahantany mba hampandehanana ny fizahantany any Ginea. Ho porofon'izany, nihetsika ireo olona ambony ao amin'io sampan-draharaha io mba hanamora ny fahazoako ilay toerana. Hasehoko any Ginea amin'ny volana Oktobra ilay tetikasa aorian'ny fandalovako any Karolina Atsimo, ary amin'izay fotoana izay, horesahako ny haavon'ny fiarahana miasa amin'ireo andrim-panjakana.
5 andro izayAngola